प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्नुका तीन कारण - Nepal Samaj
प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्नुका तीन कारण
७ जेठ, २०७८नेपाल समाजराजनीति, मुख्य समाचार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिएका छन्, न संसदीय प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएका छन् । तर, अचानक नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टे म्याद जारी गरेकी छन् । व्यक्तिविशेषको कुर्सी सुरक्षित गर्न संविधान कुल्चिएको भन्दै संविधानविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलद्वारा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादको तयारी गरेका छन् । सर्वत्र विरोध हुने गरी कदम चाल्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि के दवाव थियो ?
१. आगामी बाटो अँध्यारो देखेपछि
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामै नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका छन् । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई संसद्मा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भए प्रधानमन्त्री राजनीतिक र नैतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जसले उनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्याउन सक्छ । अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेकै समेत पूरै सांसदको समर्थन नरहेकाले ९३ मत मात्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि गैरसंवैधानिक बाटोमार्फत नयाँ सरकार गठन आह्वान भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ । विपक्षी दलहरूले बजेटअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
२. संवैधानिक पराजय भोगेपछि प्रतिशोध
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्याएको दोस्रो विषय हो । बहुमतको सरकारको हैसियतमा हुँदासम्म (२७ वैशाखसम्म) प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा सात मन्त्री गैरसांसद थिए । २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
३. राष्ट्रिय सभामा हारपछिको बदला
उता आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण एमालेले बागमतीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा हार व्यहोरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार डा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा डा देवकोटाले पाँच हजार ८८ र एमालेका थापाले चार हजार १४ मतभार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले एक सय ३२ मतभार प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका मतदाताले सहयोग गरेपछि डा देवकोटाको जित भएको छ । एमालेको खनाल–नेपाल समूह, माओवादी, कांग्रेस र जसपाको डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको तर्फबाट डा देवकोटा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेको एकल बहुमत थियो । तर, अन्तर्विरोधका कारण थापाले चुनाव हारे । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।